काेराेना अपडेट – Sudarshan Khabar
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उडाए सरकारी आदेशको धज्जी, कोभिड हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उडाए सरकारी आदेशको धज्जी, कोभिड हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी फाइल फोटो। शुदर्शन खबर २०७८ माघ १३ काठमाडौँ— प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोना संक्रमित भएको चौथो दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको छ। माघ ९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली चौथो दिनमा माघ १२ गते नै […]
अधिवेशनलगत्तै देशैभर एमाले नेता-कार्यकर्तामा कोरोना संक्रमण,
अधिवेशनलगत्तै देशैभर एमाले नेता-कार्यकर्तामा कोरोना संक्रमण, केही जिल्लाको निर्वाचन स्थगित २०७८ माघ २ शुदर्शन खबर काठमाडौं । नेकपा एमालेका जिल्ला अधिवेशनहरूबाट फर्किएका अधिकांश नेता कार्यकर्ता बिरामी परेका छन् । देशैभरका प्रायः सबै जिल्ला अधिवेशनपछि बिरामी परेका नेता कार्यकर्तामध्ये धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको एमालेले जनाएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, युवराज ज्ञवाली, महासचिव शंकर पोखरेलसहितका […]
आइसोलेसन रहेका ‘प्रचण्ड’को कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
आइसोलेसन रहेका ‘प्रचण्ड’को कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? आइसोलेसन रहेका ‘प्रचण्ड’को कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । फाइल तस्बिर। माघ २ शुदर्शन खवर २०७८ काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा बसेका प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनकी छोरी गंगा […]
काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट ‘स्मार्ट लकडाउन’ : के गर्न पाइन्छ, के पाइन्न ?
काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट ‘स्मार्ट लकडाउन’ : के गर्न पाइन्छ, के पाइन्न ? काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट ‘स्मार्ट लकडाउन’ : के गर्न पाइन्छ, के पाइन्न ? शुदर्शन खबर २८ पुष २०७८ काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरेको छ। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसीसी) को सिफारिस अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिएको हो। काठमाडौं, ललितपुर र […]
माधव नेपाललाई कोरोना संक्रमण शुदर्शन खबर २७ पुस २०७८, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार कोरोनासंग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि गरिएको परीक्षणपछि अध्यक्ष नेपाललाई कोरोना संक्रमण लागेको पुष्टि भएको छ । ‘परीक्षण गर्दा मंगलबार कोरोना पुष्टि भयो’, खतिवडाले भने, […]
स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारी
स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारी शुदर्शन खबर २७ पुस २०७८, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि १५ दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरु बन्द गराएको छ । सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृहमन्त्रालयले सबै […]
एकैदिन थपिए १४४६ जना कोरोना संक्रमित
एकैदिन थपिए १४४६ जना कोरोना संक्रमित शुदर्शन खबर २०७८ पौष २६ काठमाडौँ– नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४४६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा थप २ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६०६ पुगेको छ। यस्तै सोमबार २५५ […]
सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने ,माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द
कोरोना त्रासः सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने ०७८ पुष २५, शुदर्श्ना खबर काठमाडौं । सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने भएको छ । आइतबार बसेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) को बैठकले सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सीसीएमसीसीले […]
यस्ता छन् ओमिक्रोन लहरले प्रभावित मुलुकहरु : अमेरिकी प्रशासन संरचना कमजोर हुन थाल्यो
काठमाडौं । शुदर्शन खबर \_ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले विश्वभर पुनः संक्रमण तीव्ररुपमा फैलाएको छ । युरोप र अमेरिकापछि अब एसियामा समेत संक्रमणको गति तीव्र बनेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा संसारभर २६.९६ लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । सोही अवधीमा ६ हजार ३६९ मानिसको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार अमेरिकामा ८.४९ लाख संक्रमित थपिएका […]
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई पनि कोरोना संक्रमण
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई पनि कोरोना संक्रमण शुदर्शन खबर २०७८ पुष २४ काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । प्रचण्डको निजी सचिवालयले स्वास्थ्यमा केही असहजता देखिएकोले हिजो बेलुकी पीसीआर परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको बताएको छ। ‘उहाँ अहिले आफ्नै निवासमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहनु भएको र स्वास्थ्य अवस्था […]